Ndirangarire? Webhusaiti Cookies
China, Gunyana 16, 2010 Chipiri, April 1, 2014 Nick carter
Ndinotyisa nemazita. Ndinoshuva dai ndaigona kuisa kuki yako muuropi hwangu saka pese pandinokuona paruzhinji zvinorangarira. Ini ndinofunga ndiyo imwe nzira iyo makomputa ari "akangwara" kupfuura vanhu. Asi, nekuda kwekushomeka kwesimba kwangu, ndinoshamiswa kwazvo apo vamwe vanogona kundirangarira zviri nyore mushure mekunge mukana mumwe wasangana. Unyanzvi. Unoziva chii hazvindifadze: kana vanhu vachinyepera. Izvi zvese-zvakajairika kuchechi kwangu, uko munhu wese anopfeka mazita emazita. Ehezve, nevanhu mazana manomwe varipo, kune akawanda mapfupi anotarisisa pachipfuva changu usati watangazve kusangana uchiti, "Mhoroi, Nick!" vachinyemwerera vakapenda. Handina kushamisika.
Zvino, nekukanganisa kwambotaurwa kwepfungwa dzevanhu, zvinonyatso kupembedzwa kuti vatinonamata navo vasarangarira zita rangu. Saka chii chisingaregererwe? Kana komputa isingakwanise. Tekinoroji iri nyore-nyore kushandisa kushandisa kurangarira vanhu kwemawebhusaiti kuti vatadze pairi. Kunyange zvakadaro, vazhinji vachiri kudaro. Uye, zvakatoipisisa, ndizvo chaizvo zvimwe zvinoshungurudza kana webhusaiti isingakwanise kundirangarira kupfuura kana munhu asingakwanise.
Kutanga, tora munhu wese anofarira mushanyi (kana, zvirinani kuitisa kushambadzira) GoDaddy.
Ndiri mutengi weGoDaddy. Ndave nemakore. Uye, zvakanaka sei kwavari kurangarira zita rangu pandinoshanya. Pese pandinotanga chikamu chitsva paGoDaddy.com, ndinogamuchirwa na "Kugamuchirwa, Nicholas." Ivo vanotondiudza kuti ini ndine mashoma maseru anopera, uye vanopa mamwe madhiri ayo (ndinofungidzira) akasarudzwa zvinoenderana nemafambiro angu ekutenga.
Basa rakanaka… ndoda. Ichokwadi, varangarira zita rangu. Asi, ivo havasi kundibata chero zvakasiyana semhedzisiro. Ini ndanyora chaizvo GoDaddy nechichemo ichi: pandinouya, unondibata senge ndisiri mutengi. Iyo yekufambisa ndeye ese pre-kutengesa zvemukati. Kana ini ndichida kusvika kumatunhu angu, nzvimbo dzangu dzinotambirwa, account yangu, nezvimwe, fungidzira zvandinofanira kuita: tinya chinongedzo "kwete iwe" uye pinda zvekare. Izvo, nenzira, hazviratidze fomu nyowani yekupinda pane iro peji. Kwete, inorarama hyperlink kune peji nyowani inofanirwa kurodha.
Zvino, ini ndinogona kukoshesa kukosha kwekuchengetedza ruzivo runoda kupinda-mukati. Uye, zvirokwazvo, ndinofara kuti vanoita. Zvisinei, LinkedIn akakwanisa kuwana tenzi nzira yekurangarira iwe--kwazvo kukurangarira iwe-uye zvakadaro uchichengetedza izvo zvinofanirwa kudzivirirwa kuseri kwekupinda.
Pandinosvika paLinkedIn.com, ndinogona kuona zvese zvandinotarisira kuona ndichifunga kuti ndiri mushandisi akanyoreswa uye vanondirangarira. Ini ndinogona kufamba ndisina kumiswa. Haisi kuyeuka kwekunyepedzera. Nekudaro, Kana ndikaedza kutumira, kugadzirisa, kana kushandura chero dhata, vanondivhiringidza neinokurumidza-yekutaurirana dialog, iyo inorangarira chaizvo zita rangu rekushandisa. Nekudaro, imwe chete inokurumidza shamba yekuzadza, rova ​​pinda, uye ini ndinoramba ndichienderera mushe.
Ndanga ndichishanda kuti ndive nani pakurangarira vatengi vangu, futi. Paangu nzvimbo, tanga tichipa kurangarira vatengi kwenguva yakareba. Tarisa bhokisi uye isu tichayeuka ako ekupinda-mukati magwaro iwe. Asi, nguva pfupi yadarika ndakadzidza hunyanzvi hutsva kubva kushamwari yangu Mack Earnhardt kuti ungangoda kushandisa. Kana chikamu chemumwe munhu chikapera, kana kana vakashanyira chinongedzo chinoda kutanga wapinda, usati wavadzingira kunze kuchiratidziro chekupinda, chengeta chikamu chinoshanduka nekwavaienda. Zvino, mushure mekubudirira kwekupinda, ivo vanodzoreredzwa chaipo pavaida kuenda (Ndatenda, Mack)
Nzira yakanakisa yekuziva yekuisa yako saiti kuyeuka vashanyi ndeyekugara uchishanya iwe pachako. Shandisa saiti seizvo vatengi vako vaizoita, ona zvinoshanda uye chii chisingashande. Handikwanise kufungidzira kuti vashandi veGoDaddy vanonyatsoshandisa yavo webhusaiti kubata yavo domaini - pamwe chikonzero chikonzero chavo chinosemesa hachina kucherechedzwa. LinkedIn, kune rimwe divi, ingangove iri kushanda chaizvo neyavo mudziyo. Iwe unofamba mushangu dzevatengi vako here? Rangarira zvazvakaita kunzwa kuti wakanganikwa.
Sep 16, 2010 na12: 45 PM
Zvizere unobvumirana, Nick! Kunze kwekufarira GoDaddy, uyo ane imwe yeakasununguka Terms of Service muindastiri.
Sep 16, 2010 na4: 33 PM
Kana iwe uchifunga kuti yavo TOS yakasununguka, verenga yangu. Geesh, zvinoshamisa kuti chero munhu anotenga kubva kwandiri. (oops, yaive iyo outloud)
Sep 16, 2010 na6: 04 PM
Dambudziko ravo nderekuti vanogona kutora domain yako pasina mapepa epamutemo. Verenga nodaddy.com kune dzimwe dzenyaya dzinotyisa pamabhizinesi akarasikirwa nemazita avo echizinda pasina chikonzero.